July 2017 - ဗေဒင်ဝါသနာအိုး
သင့်လက်က ဘယ် နံပါတ်လဲ. ???
ရှေ့လက္ခဏာကျမ်းများတွင် ပါသောလက်ပုံစံ (၇)မျိုးမှာ-
၁။လက်ချောင်းများ အလွန်တိုတုတ်၍ အယုတ်ညံ့ဆုံးလက်။
၂။လေးထောင့်စပ်စပ် ပုံသဏ္ဍန် ရှိ၍ အသုံးဝင်သော လက်မျိုး။
၃။ယောင်မ ပုံသဏ္ဍန်နှင့် စိတ်မြန်လက်မြန် လုပ်တတ်သောလက်မျိုး။
၄။လက်ဆစ်များကြီး၍နေသော အတွေးသမား၏ လက်။
၅။ကံတော့ပုံသဏ္ဍန် ရှိသော အနုပညာရှင်လက်။
ယခုဖော်ပြသော လက်ပုံစံ သုံးမျိုးမှာ အဘမင်းသိင်္ခ ၏ နည်းဖြစ်၏……
A….(Thin but Long)
ဗျက်ကျဉ်း၍ အလျားရှည်သော လက်
၁။စိတ်သဘောထားပြည့်ဝတတ်သည် သဒ္ဒါတရား ရှိသည် ထိုးထွင်းဥာဏ် ကောင်းသည်။
၂။လက်တွေ့လုပ်ငန်းထက် စိတ်ကူးယဉ်လုပ်ငန်း တို့ကို ပို၍နှစ်သက်သည်။
၃။ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် စိတ်ရှည်လက်ရှည်နှင့် ဖြည်းဖြည်းဆေးဆေး တိတိကျကျ လုပ်တတ်သည်။
၄။စကားပြောဆိုရာတွင် သူတစ်ပါးနားခံသာ၊ နားဝင်ချိုအောင်ပြောတတ်၏။
၆။အစားအသောက်ရွေးသည်၊မာနရှိသည် ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသည်။ခေါင်းဆောင်လုပ်လို စိတ်များစွာမရှိတတ်။
B…(Broad but Short)
ဗျက်ကျယ်၍ အလျားတိုသော လက်
ဗျက်သင့်လျော်စွာ ကျယ်၏၊လက်ချောင်းများတို၏ သို့ရာတွင်အချိုးကျ၏၊လက်ဝါးပြင်မှာ ပျော့ပြောင်းနူးညံ့သော အမျိုးအစားနှင့် ကြမ်းတမ်းသော အမျိုးအစား (၂)မျိုး ရှိတတ်ပါသည်၊လက်မကို စေ့လိုက်လျှင် လက်ညို့၏တစ်ဝက်ကို သွား၍ မှီနေတတ်သည်။
ထိုလက်များကို ကြည့်သောအခါ လမ်းကြောင်စုံမစုံကြည့်ရ၏၊ လမ်းကြောင်းစုံလျှင် အသိဥာဏ်မှာ တချို့နေရာတွင် လိုအပ်သည်ထက် ပိုလွန်းနေတတ်သည်၊ စိတ်မြန်လက်မြန် လုပ်တတ်သည်၊ စကားကို တိုတိုပြောတတ် သကဲ့သို့ တိုတိုပြောမှ ကြိုက်၏၊ နဂိုစိတ်ရင်း အလွန်ကောင်း၏ စကားတိုတောင်းမူ့ကြောင့် လူချစ်လူခင်နည်းတတ်၏၊ အဝတ်အစားကို ဂရုမစိုက်တတ်၊ ဖြစ်သလို ဝတ်တတ်၏ ကြီးပွားအောင်မြင်သူများဖြစ်တတ်၏။
C…(The Lowest Type Hand)
လက်ချောင်းများ အလွန်တိုတုတ်၍ လက်ဝါးပြင် ကြမ်းတမ်းသော တတိယတန်းလက်
များသောအားဖြင့် ဤလက်ပုံစံတွင် အာယု ဥာဏ ဟာဒယ ဟူသော လမ်းကြောင်း သုံးကြောင်းသာ ပါတတ်သည်။
လွန်စွာမိုက်မဲ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိမရှိ အိပ်ခြင်း စားခြင်း မေထုန်မှီဝဲခြင်း သုံးမျိုးထက် နည်းနည်း ပဲပို၍ သိသည်။
သငျ့လကျက ဘယျ နံပါတျလဲ. ???
ရှလေ့က်ခဏာကမျြးမြားတှငျ ပါသောလကျပုံစံ (၇)မြိုးမှာ-
၁။လကျခြောငျးမြား အလှနျတိုတုတျ၍ အယုတျညံ့ဆုံးလကျ။
၂။လေးထောငျ့စပျစပျ ပုံသဏ်ဍနျ ရှိ၍ အသုံးဝငျသော လကျမြိုး။
၃။ယောငျမ ပုံသဏ်ဍနျနှငျ့ စိတျမွနျလကျမွနျ လုပျတတျသောလကျမြိုး။
၄။လကျဆဈမြားကွီး၍နသေော အတှေးသမား၏ လကျ။
၅။ကံတော့ပုံသဏ်ဍနျ ရှိသော အနုပညာရှငျလကျ။
ယခုဖျောပွသော လကျပုံစံ သုံးမြိုးမှာ အဘမငျးသိင်ျခ ၏ နညျးဖွဈ၏……
ဗကျြကဉျြး၍ အလြားရှညျသော လကျ
၁။စိတျသဘောထားပွညျ့ဝတတျသညျ သဒ်ဒါတရား ရှိသညျ ထိုးထှငျးဉာဏျ ကောငျးသညျ။
၂။လကျတှလေု့ပျငနျးထကျ စိတျကူးယဉျလုပျငနျး တို့ကို ပို၍နှဈသကျသညျ။
၃။ဘာကိုပဲလုပျလုပျ စိတျရှညျလကျရှညျနှငျ့ ဖွညျးဖွညျးဆေးဆေး တိတိကကြ လုပျတတျသညျ။
၄။စကားပွောဆိုရာတှငျ သူတဈပါးနားခံသာ၊ နားဝငျခြိုအောငျပွောတတျ၏။
၆။အစားအသောကျရှေးသညျ၊မာနရှိသညျ ရဲစှမျးသတ်တိရှိသညျ။ခေါငျးဆောငျလုပျလို စိတျမြားစှာမရှိတတျ။
ဗကျြကယျြ၍ အလြားတိုသော လကျ
ဗကျြသငျ့လြျောစှာ ကယျြ၏၊လကျခြောငျးမြားတို၏ သို့ရာတှငျအခြိုးကြ၏၊လကျဝါးပွငျမှာ ပြော့ပွောငျးနူးညံ့သော အမြိုးအစားနှငျ့ ကွမျးတမျးသော အမြိုးအစား (၂)မြိုး ရှိတတျပါသညျ၊လကျမကို စလေို့ကျလြှငျ လကျညို့၏တဈဝကျကို သှား၍ မှီနတေတျသညျ။
ထိုလကျမြားကို ကွညျ့သောအခါ လမျးကွောငျစုံမစုံကွညျ့ရ၏၊ လမျးကွောငျးစုံလြှငျ အသိဉာဏျမှာ တခြို့နရောတှငျ လိုအပျသညျထကျ ပိုလှနျးနတေတျသညျ၊ စိတျမွနျလကျမွနျ လုပျတတျသညျ၊ စကားကို တိုတိုပွောတတျ သကဲ့သို့ တိုတိုပွောမှ ကွိုကျ၏၊ နဂိုစိတျရငျး အလှနျကောငျး၏ စကားတိုတောငျးမူ့ကွောငျ့ လူခဈြလူခငျနညျးတတျ၏၊ အဝတျအစားကို ဂရုမစိုကျတတျ၊ ဖွဈသလို ဝတျတတျ၏ ကွီးပှားအောငျမွငျသူမြားဖွဈတတျ၏။
လကျခြောငျးမြား အလှနျတိုတုတျ၍ လကျဝါးပွငျ ကွမျးတမျးသော တတိယတနျးလကျ
မြားသောအားဖွငျ့ ဤလကျပုံစံတှငျ အာယု ဉာဏ ဟာဒယ ဟူသော လမျးကွောငျး သုံးကွောငျးသာ ပါတတျသညျ။
လှနျစှာမိုကျမဲ၏ ရဲစှမျးသတ်တိမရှိ အိပျခွငျး စားခွငျး မထေုနျမှီဝဲခွငျး သုံးမြိုးထကျ နညျးနညျး ပဲပို၍ သိသညျ။
” ၀ိတ် အမြန်ကျစေသော ဂမ္ဘီရယတြာနည်း “
” ၀ိတ် အမြန်ကျစေသော ဂမ္ဘီရယတြာနည်း ”
၀ိတ်ချတာတို့ ၊ အဆီချတာတို့ အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားလာပါတယ် …။
တစ်ချို့ကလည်း ဒဲ့လာမေးကြပါတယ် …။
” ၀ိတ်ကျအောင် ယတြာချေလို့မရဘူးလား … ”
ရှိပါတယ် …။ ဂမ္ဘီရယတြာနည်းတွေမှာ ၀ိတ်အမြန်ကျစေတဲ့နည်းရှိပါတယ် …။ သိပ်ပြီးတော့ မခက်ပါဘူး …။ လွယ်လွယ်လေးရယ်ပါ …။
၀ိတ်အမြန်ကျချင်သူများ ၊ ၀ိတ်ချတဲ့နေရာမှာ ဂမ္ဘီရယတြာနည်းတွေရဲ့ အကူအညီလိုချင်သူများ
” ရေခဲသေတ္တာမှာ မိမိရဲ့ ဓါတ်ပုံကို ကပ်ထားလိုက်ပါ ”
လို့ မှတ်သားဖူးပါကြောင်း … ။
(ရေခဲသေတ္တာမှာ ဓါတ်ပုံကပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း အစားအသောက်၊
အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ရပါမယ် …။ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း ပုံမှန်လုပ်ရပါမယ်။
ဂမ္ဘီရနည်းကို အကူအညီရယူတာဖြစ်ပါတယ် …။
ရေခဲသေတ္တာမှာ ဓါတ်ပုံကပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်က အစားအသောက်တွေကို နင်းကန်းပြီး စားနေလို့မရပါ … ? )
” ၀ိတျ အမွနျကစြသေော ဂမ်ဘီရယတွာနညျး ”
၀ိတျခတြာတို့ ၊ အဆီခတြာတို့ အခုနောကျပိုငျး ခတျေစားလာပါတယျ …။
တဈခြို့ကလညျး ဒဲ့လာမေးကွပါတယျ …။
” ၀ိတျကအြောငျ ယတွာခလြေို့မရဘူးလား … ”
ရှိပါတယျ …။ ဂမ်ဘီရယတွာနညျးတှမှော ၀ိတျအမွနျကစြတေဲ့နညျးရှိပါတယျ …။ သိပျပွီးတော့ မခကျပါဘူး …။ လှယျလှယျလေးရယျပါ …။
၀ိတျအမွနျကခြငျြသူမြား ၊ ၀ိတျခတြဲ့နရောမှာ ဂမ်ဘီရယတွာနညျးတှရေဲ့ အကူအညီလိုခငျြသူမြား
” ရခေဲသတ်ေတာမှာ မိမိရဲ့ ဓါတျပုံကို ကပျထားလိုကျပါ ”
လို့ မှတျသားဖူးပါကွောငျး … ။
(ရခေဲသတ်ေတာမှာ ဓါတျပုံကပျပွီး မိမိကိုယျတိုငျကလညျး အစားအသောကျ၊
အနအေထိုငျ ဆငျခွငျရပါမယျ …။ လကေ့ငျြ့ခနျးလညျး ပုံမှနျလုပျရပါမယျ။
ဂမ်ဘီရနညျးကို အကူအညီရယူတာဖွဈပါတယျ …။
ရခေဲသတ်ေတာမှာ ဓါတျပုံကပျပွီး မိမိကိုယျတိုငျက အစားအသောကျတှကေို နငျးကနျးပွီး စားနလေို့မရပါ … ? )
ညာဘက်ကိုဖြစ်စေ ခပ်စောင်းစောင်းလေး အရစ်ထနေတယ်။ တချို့က အဲ့ဒီဗွေကို နဂါးပတ်ကျော့ကွင်းလို့ ခေါ်ကြတယ်။
ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောကို အထူး ဒုက္ခပေးတတ်၏။
ကတော့ အိမ်ခေါင်မိုးလို ချွန်းချွန်းလေးဖြစ်၏။
အတွေး အခေါ်အကြံအစည် ပြတ်သား၏
လက်ငါးချောင်းလုံးမှာ အဲ့ဒီဗွေပါရင် သူဟာ ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ သာသနာ့ဘောင် ကို ဝင်သွားတတ်၏။
လူတွေရဲ့ အသက်သေခြင်း၊ရှင်ခြင်း ကိုများသောအားဖြင့် အသက်လမ်းကိုကြည့်ကြ၏။
သေတွင်းထဲက ထွက်လာတဲ့ လူတွေရဲ့ လက်မှာ ခရုပတ်ဗွေပါနေတတ်၏။
လက်ဝါးပြင်ပေါ်က မကောင်းတဲ့အမှတ်အသားတွေကို ခရုပတ် ဗွေနဲ့ ပွတ်ပေးလျှင် မကောင်းတဲ့ အမှတ်အသားပျောက်၏။
ကတော့ ဗွေရဲ့ ဗဟိုချက်ဟာ နှစ်ခုဖြစ်နေတတ်၏။
လက်မမှာပါရင် ဆိုးသမျှထိပ်ခေါင်၊ ညစ်ပတ်သမျှထိပ်ဆုံး၊လူယုတ်မာတို့၏ ဘိုးအေဖြစ်တတ်၏။
လက်ညိုးမှာပါရင် စည်းကမ်း ဥပဒေကို ချိုးဖောက်တတ်၏။
လက်ခလယ်မှာရှိရင် မိဘမသေခင် အမွေတောင်းတတ်။ဆရာသမားရဲ့ အရိုက်အရာကို လုယူတတ်။
လက်သူကြွယ်မှာရှိရင် အိမ်ထောင်ဖက်ကို နိုင့်ထက်စီးနင်းလုပ်တတ်၏။
လက်သန်းမှာပါခဲ့ရင် ပညာသင်ကြားခြင်းကို မနှစ်သက်ဘူး။
ကိုယ်ကလည်းမသင်ယူဘူး။ ကိုယ်ကလည်း သင်မပေးဘူး။
နောက်တစ်ခုက လက်မဟာ အဖေနဲ့ဆိုင်၏ သူ့ကြောင့်အဖေနာမည်ပျက်တတ်၏။
လက်သူကြွယ်ဟာ ဆွေမျိုးနဲ့ ဆိုင်၏
သူ့ကြောင့် သူ့ဆွေမျိုး နာမည်ပျက်တတ်၏ ။
ညာဘကျကိုဖွဈစေ ခပျစောငျးစောငျးလေး အရဈထနတေယျ။ တခြို့က အဲ့ဒီဗှကေို နဂါးပတျကြော့ကှငျးလို့ ချေါကွတယျ။
ဦးနှောကျနဲ့ အာရုံကွောကို အထူး ဒုက်ခပေးတတျ၏။
ကတော့ အိမျခေါငျမိုးလို ခြှနျးခြှနျးလေးဖွဈ၏။
အတှေး အချေါအကွံအစညျ ပွတျသား၏
လကျငါးခြောငျးလုံးမှာ အဲ့ဒီဗှပေါရငျ သူဟာ ဘဝရဲ့ နောကျဆုံးအခြိနျမှာ သာသနာ့ဘောငျ ကို ဝငျသှားတတျ၏။
လူတှရေဲ့ အသကျသခွေငျး၊ရှငျခွငျး ကိုမြားသောအားဖွငျ့ အသကျလမျးကိုကွညျ့ကွ၏။
သတှေငျးထဲက ထှကျလာတဲ့ လူတှရေဲ့ လကျမှာ ခရုပတျဗှပေါနတေတျ၏။
လကျဝါးပွငျပျေါက မကောငျးတဲ့အမှတျအသားတှကေို ခရုပတျ ဗှနေဲ့ ပှတျပေးလြှငျ မကောငျးတဲ့ အမှတျအသားပြောကျ၏။
ကတော့ ဗှရေဲ့ ဗဟိုခကျြဟာ နှဈခုဖွဈနတေတျ၏။
လကျမမှာပါရငျ ဆိုးသမြှထိပျခေါငျ၊ ညဈပတျသမြှထိပျဆုံး၊လူယုတျမာတို့၏ ဘိုးအဖွေဈတတျ၏။
လကျညိုးမှာပါရငျ စညျးကမျး ဥပဒကေို ခြိုးဖောကျတတျ၏။
လကျခလယျမှာရှိရငျ မိဘမသခေငျ အမှတေောငျးတတျ။ဆရာသမားရဲ့ အရိုကျအရာကို လုယူတတျ။
လကျသူကွှယျမှာရှိရငျ အိမျထောငျဖကျကို နိုငျ့ထကျစီးနငျးလုပျတတျ၏။
လကျသနျးမှာပါခဲ့ရငျ ပညာသငျကွားခွငျးကို မနှဈသကျဘူး။
ကိုယျကလညျးမသငျယူဘူး။ ကိုယျကလညျး သငျမပေးဘူး။
နောကျတဈခုက လကျမဟာ အဖနေဲ့ဆိုငျ၏ သူ့ကွောငျ့အဖနောမညျပကျြတတျ၏။
လကျသူကွှယျဟာ ဆှမြေိုးနဲ့ ဆိုငျ၏
သူ့ကွောငျ့ သူ့ဆှမြေိုး နာမညျပကျြတတျ၏ ။
မွေးဖွားသည့်လ ရာသီအလိုက် ဒေါသကြီးပုံ
-ဒီကာလအတွင်း မွေးဖွားတဲ့သူတွေက စည်းကမ်းမရှိတဲ့၊ လေးစားချင်စရာမကောင်းတဲ့အပြုအမှုလောက် မုန်းတာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတပါးက စိန်ခေါ်တယ်ဆိုရင် ဒေါသထောင်းခနဲ ထလာတတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်။ ဒေါသကို ချက်ချင်းထိန်းချုပ်ပေးမယ့်အရာ သို့မဟုတ် အခြားလူဘေးနားမှာ မရှိဘူးဆိုရင် ရက်စက်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်သေချာတာတစ်ခုကတော့ Aries မှာမွေးတဲ့သူတွေကို စိတ်ငြိမ်သွားအောင် ပြန်လုပ်ပေးဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီရက်တွင်းမှာ မွေးတဲ့လူတွေဟာ သူတစ်ပါးကို လွယ်လွယ်ကူကူခွင့်လွှတ်ပေးတတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခံစားချက်တွေကို ထိန်းချုပ်တတ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် သူတို့ကတော့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ နေတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ စိတ်ဆိုးတယ်မဆိုးဘူးဆိုတာကို ခန့်မှန်းဖို့ ခက်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတည်ငြိမ်မှုကို မထိန်းထားနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုပြန်တုံ့ပြန်ရမှန်းမသိအောင်ပဲ ကျွဲရိုင်းကြီးတွေလိုပဲ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။
ဘယ်အချိန်တွေမှာ စိတ်ဆိုးလဲဆိုရင်တော့ သူမဟုတ်တဲ့နေရာမှာ စွပ်စွဲတာမျိုးဆို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အတိတ်မှာ မှားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုခုကို တစ်ယောက်ယောက်က သူ့ကို ပြန်စွပေးတယ်ဆိုရင် ခံနိုင်ရည်မရှိပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို သတိထားပြီး ဆက်ဆံဖို့လိုတဲ့သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ပျော်ပျော်ပဲနေတတ်ပြီး ဖော်ရွယ်တဲ့အကျင့်ရှိသူများ ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင် သူတို့အမူအရာကို ကြည့်ပြီးတော့ လွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်ပါတယ်။ ဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ အကြောင်းပြချက်တွေကို နားမထောင်တော့ပဲနဲ့ အော်ဟစ်သောင်းကျန်းတာမျိုး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် အားရပါးရ ပြောဆိုကြိမ်းမောင်းနိုင်မှ ကျေနပ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်စရာကောင်းပြီး ဂရုစိုက်ကြင်နာတတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်သောကြောင့် စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရပ်မျိုးဆို သူတို့ မနှစ်သက်ပါဘူး။ သည်းခံစိတ်အပြည့်ရှိပြီးတော့ စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်တာမျိုး မရှိသလောက်ပါပဲ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်အောင် တမင်တကာကြံရွယ်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်တောင် တိတ်တဆိတ်ရှောင်ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ပါဘူး။
စိတ်ဆိုးပြီဆိုရင် ချွေးပြန်ပြီး နှုတ်မှ စကားလုံးတွေလုံးထွေးသွားရင်း တုန်ပြီး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ မျက်ရည်ကျလွယ်ပြီးတော့ တစ်ဖက်လူက သူ့ရဲ့ရိုးသားမှုတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ချက်ချင်းတောင်းပန်ဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့ အေးစက်ပြီး ဂရုစိုက်တတ်တဲ့အကျင့်မရှိတဲ့သူလို့ပဲ ထင်ကြပါတယ်။ ပွဲတတ်တာမျိုးကို ဝါသနာမပါတဲ့သူဖြစ်ပေမယ့် စိန်ခေါ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေဆို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင် သူတပါး ဂုဏ်သိက္ခာကျတဲ့အထိ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူနဲ့ရန်ဖြစ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ တသက်လုံး ရန်ငြိုးရှိတတ်ပါတယ်။
အများအားဖြင့်တော့ သိမ်မွေ့ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကို ဒေါသထွက်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေကိုတော့ ကြမ်းတမ်းတဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ ပြန်တုံ့ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ အော်ငေါက်ဆဲဆိုပြီးတော့ ကိုယ့်ဘေးမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ကောက်ပေါက်တတ်တဲ့ အကျင့်လည်းရှိပါတယ်။ စားပွဲခုံ၊ နံရံတွေထိုးလိုက်လို့ ကိုယ့်လက်ကို နာကြင်အောင် လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် စကားနိုင်လုပြီးရန်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ မနေမိဖို့ သတိထားရပါမယ်။ ပြီးတော့ တခြားလူတွေရဲ့နှစ်သိမ့်ပေးတာကို ဂရုမစိုက်ပဲနဲ့ သူတို့ရဲ့ အယူအဆကို လေးစားတဲ့အကျင့်လည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်။
ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်များထဲမှာမှ ချစ်စရာအကောင်းဆုံးသူများဆိုပြီးတော့ သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူအနည်းစုကပဲ သူတို့ဒေါသထွက် စိတ်ဆိုးတာမျိုးကို မြင်ဖူးကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့အကျင့်လည်းရှိကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ထွက်ခဲတဲ့ဒေါသမီးတောက်လာပြီ ဆိုရင်တော့ အခြားရာသီခွင်တွေထက် ပိုပြီးဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တည်ငြိမ်တဲ့အကျင့်စရိုက်တော့ ရှိပေမယ့် တခါတလေ လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ တချို့လူတွေက ဒေါသထွက်လွယ်တဲ့သူပဲလို့ သတ်မှတ်ကြပေမယ့် ကိုယ့်ကို ပျော်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူအနားမှာတော့ ဒေါသမထွက်ဖူးကြပါဘူး။ သူငယ်ချင်းဆိုရင်လည်း ရွေးချယ်ခင်တတ်ပြီး သူတို့အပေါ်မှာဆို အနစ်နာခံတတ်တဲ့စိတ်ဓါတ်အပြည့်ရှိပါတယ်။
သူ့နှုတ်ကထွက်လိုက်တဲ့စကားလုံးတွေဟာ အေးစက်ပြီးအဆိပ်တွေနဲ့ပြည့်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့စိတ်ဆိုးပြီး ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်တွေကို ပြန်တွေးပြီးတော့ သီးမခံတတ်တဲ့အားနည်းချက်တွေကြောင့် သူတို့ကိုသူတို့ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
ဒီရာသီခွင်မှာ မွေးတဲ့သူတွေကတော့ ခံစားချက်ကို အပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲ ခံစားလွယ်တဲ့အကျင့်ရှိကြပါတယ်။ စိတ်ဆိုးလွယ်တဲ့အတွက် မထင်မှတ်ထားတဲ့ဒေါသကြောင့် ဘေးနားကလူတွေ အံ့သြသွားစေနိုင်ပါတယ်။ တခြားလူရဲ့ ချော့မေ့ပြီးပြောဆိုတာကို စောင့်ရင်းနဲ့ ဒေါသကို မြိုသိပ်ထားပြီး နှုတ်ဆိတ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင် အခြားသူကိုပဲ အပြစ်ပုံချပြောတတ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်တော့မှ အရင်အလျော့မပေးတတ်ကြပါဘူး။
လက်တွေ့ဆန်ပြီး နည်းစနစ်ကျကျနေတဲ့သူတွေမို့လို့ သူတို့ဟာ ခံစားလွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်သလို အရှိကိုအရှိတိုင်း ခံစားချက်ရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ပိုင်းမှာ မာတဲ့ပုံပေါ်နေပေမယ့် သူတို့ခံစားလွယ်တဲ့အကျင့်ကို အခြားသူတွေမမြင်နိုင်အောင် ဖုံးကွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကိစ္စတွေကို စိတ်ဆိုးစိတ်တိုနေပေမယ့် စိတ်ကိုလွှတ်ပြီး ဒေါသကိုထိန်းထားတတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ အခြားသူတွေ အလန့်တကြားဖြစ်အောင် လုပ်တတ်ပြီး လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုပဲ ဒေါသမထွက်ပဲ အနီးအနားမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံး မလုံမလဲဖြစ်တဲ့အထိ စွပ်စွဲပြောဆိုတတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်။
သူတို့တွေကတော့ စိတ်ခံစားချက်လွှတ်လိုက်တာမျိုးကို မနှစ်သက်ပဲ ကြင်နာတတ်ပြီး စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါသထွက်ခဲပါတယ်။ လူမူဆက်ဆံရေးမှာ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေ ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားတဲ့သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့နဲ့ နားလည်မှုလွဲတာမျိုးဖြစ်ရင်တော့ ဒေါသထွက်တတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ဆိုးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို လွယ်လွယ်မမေ့ပဲ အကြာကြီးစိတ်ထဲမှာ မျိုသိပ်ထားတတ်ကြပါတယ်။
သူတို့တွေရဲ့ အကျင့်စရိတ် အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ စိတ်ဆိုးပြီးဆိုရင် ပိုပြီးစွဲဆောင်မှုကောင်းကြပါတယ်။ ခံစားတာလွယ်တဲ့အလျောက် သူများကိုလည်း အန္တရာယ်မပြုတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူများက ထိခိုက်ဖို့ရည်ရွယ်လာပြီဆိုရင်တော့ အားလုံးပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့က ခက်ထန်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ပြောဆိုတတ်ပြီး ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူသို့မဟုတ် ပစ္စည်းအားလုံးကို တုန်ခါသွားအောင် လုပ်ချင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင် ရှင်းပြတဲ့အသံကို နားမထောင်ချင်ပဲ တစ်ယောက်တည်းနေချင်တဲ့စိတ်ရှိကြပါတယ်။ ခဏတာစိတ်ဆိုးမှုတွေကို ပြန်တွေးပြီး ခွင့်လွှတ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘယ်သူနဲ့မှ အကြာကြီးစိတ်မဆိုးတတ်ကြပါဘူး။
မှေးဖှားသညျ့လ ရာသီအလိုကျ ဒေါသကွီးပုံ
-ဒီကာလအတှငျး မှေးဖှားတဲ့သူတှကေ စညျးကမျးမရှိတဲ့၊ လေးစားခငျြစရာမကောငျးတဲ့အပွုအမှုလောကျ မုနျးတာမရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူတပါးက စိနျချေါတယျဆိုရငျ ဒေါသထောငျးခနဲ ထလာတတျတဲ့အကငျြ့ရှိပါတယျ။ ဒေါသကို ခကျြခငျြးထိနျးခြုပျပေးမယျ့အရာ သို့မဟုတျ အခွားလူဘေးနားမှာ မရှိဘူးဆိုရငျ ရကျစကျတဲ့လုပျရပျတှေ လုပျမိတတျကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့သခြောတာတဈခုကတော့ Aries မှာမှေးတဲ့သူတှကေို စိတျငွိမျသှားအောငျ ပွနျလုပျပေးဖို့ လှယျကူပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ဒီရကျတှငျးမှာ မှေးတဲ့လူတှဟော သူတဈပါးကို လှယျလှယျကူကူခှငျ့လှတျပေးတတျတဲ့သူတှပေဲဖွဈပါတယျ။
ခံစားခကျြတှကေို ထိနျးခြုပျတတျပွီး ပုံမှနျအားဖွငျ့ သူတို့ကတော့ တညျတညျငွိမျငွိမျပဲ နတေတျကွပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သူတို့ စိတျဆိုးတယျမဆိုးဘူးဆိုတာကို ခနျ့မှနျးဖို့ ခကျတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီတညျငွိမျမှုကို မထိနျးထားနိုငျတော့ဘူးဆိုရငျတော့ ဘယျလိုပွနျတုံ့ပွနျရမှနျးမသိအောငျပဲ ကြှဲရိုငျးကွီးတှလေိုပဲ ကွောကျစရာကောငျးပါတယျ။
ဘယျအခြိနျတှမှော စိတျဆိုးလဲဆိုရငျတော့ သူမဟုတျတဲ့နရောမှာ စှပျစှဲတာမြိုးဆို မခံမရပျနိုငျဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈခုကတော့ အတိတျမှာ မှားခဲ့တဲ့ဖွဈရပျတဈခုခုကို တဈယောကျယောကျက သူ့ကို ပွနျစှပေးတယျဆိုရငျ ခံနိုငျရညျမရှိပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ သူတို့ရဲ့အားနညျးခကျြတှကေို သတိထားပွီး ဆကျဆံဖို့လိုတဲ့သူတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ခဈြစရာကောငျးပွီး ဂရုစိုကျကွငျနာတတျတဲ့သူတှေ ဖွဈသောကွောငျ့ စိတျမကောငျးစရာဖွဈရပျမြိုးဆို သူတို့ မနှဈသကျပါဘူး။ သညျးခံစိတျအပွညျ့ရှိပွီးတော့ စိတျဆိုးဒေါသဖွဈတာမြိုး မရှိသလောကျပါပဲ။ တဈစုံတဈယောကျက စိတျဆိုးဒေါသထှကျအောငျ တမငျတကာကွံရှယျပွီးလုပျတယျဆိုရငျတောငျ တိတျတဆိတျရှောငျထှကျသှားတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ဟာ စိတျမဆိုးတတျဘူးဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျမဟုတျပါဘူး။
စိတျဆိုးပွီဆိုရငျ ခြှေးပွနျပွီး နှုတျမှ စကားလုံးတှလေုံးထှေးသှားရငျး တုနျပွီး ဖွဈခငျြရာဖွဈဆိုပွီး စိတျလိုကျမာနျပါလုပျတတျကွပါတယျ။ မကျြရညျကလြှယျပွီးတော့ တဈဖကျလူက သူ့ရဲ့ရိုးသားမှုတှကေို ကွညျ့ပွီးတော့ ခကျြခငျြးတောငျးပနျဖို့ ကွိုးစားတတျကွပါတယျ။
အမြားအားဖွငျ့တော့ သိမျမှပွေီ့း ကိုယျ့ကိုယျကို ထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့သူတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့သူတို့ကို ဒေါသထှကျအောငျလုပျတဲ့သူတှကေိုတော့ ကွမျးတမျးတဲ့အပွုအမူတှနေဲ့ ပွနျတုံ့ပွနျတတျကွပါတယျ။ အျောငေါကျဆဲဆိုပွီးတော့ ကိုယျ့ဘေးမှာရှိတဲ့ ပစ်စညျးနဲ့ကောကျပေါကျတတျတဲ့ အကငျြ့လညျးရှိပါတယျ။ စားပှဲခုံ၊ နံရံတှထေိုးလိုကျလို့ ကိုယျ့လကျကို နာကွငျအောငျ လုပျတတျကွပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ စကားနိုငျလုပွီးရနျဖွဈတဲ့နရောတှမှော မနမေိဖို့ သတိထားရပါမယျ။ ပွီးတော့ တခွားလူတှရေဲ့နှဈသိမျ့ပေးတာကို ဂရုမစိုကျပဲနဲ့ သူတို့ရဲ့ အယူအဆကို လေးစားတဲ့အကငျြ့လညျး ရှိတတျကွပါတယျ။
တညျငွိမျတဲ့အကငျြ့စရိုကျတော့ ရှိပမေယျ့ တခါတလေ လူမဆနျတဲ့လုပျရပျတှကွေောငျ့ ဂုဏျသိက်ခာကဆြငျးသှားနိုငျပါတယျ။ တခြို့လူတှကေ ဒေါသထှကျလှယျတဲ့သူပဲလို့ သတျမှတျကွပမေယျ့ ကိုယျ့ကို ပြျောသှားအောငျလုပျပေးနိုငျတဲ့သူအနားမှာတော့ ဒေါသမထှကျဖူးကွပါဘူး။ သူငယျခငျြးဆိုရငျလညျး ရှေးခယျြခငျတတျပွီး သူတို့အပျေါမှာဆို အနဈနာခံတတျတဲ့စိတျဓါတျအပွညျ့ရှိပါတယျ။
သူ့နှုတျကထှကျလိုကျတဲ့စကားလုံးတှဟော အေးစကျပွီးအဆိပျတှနေဲ့ပွညျ့နတေတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ရဲ့စိတျဆိုးပွီး ဒေါသထှကျတဲ့အခြိနျတှကေို ပွနျတှေးပွီးတော့ သီးမခံတတျတဲ့အားနညျးခကျြတှကွေောငျ့ သူတို့ကိုသူတို့ ခှငျ့မလှတျနိုငျဖွဈတတျကွပါတယျ။
လကျတှဆေ့နျပွီး နညျးစနဈကကြနြတေဲ့သူတှမေို့လို့ သူတို့ဟာ ခံစားလှယျတဲ့သူတှဖွေဈသလို အရှိကိုအရှိတိုငျး ခံစားခကျြရှိတဲ့သူတှပေဲဖွဈပါတယျ။ အပွငျပိုငျးမှာ မာတဲ့ပုံပျေါနပေမေယျ့ သူတို့ခံစားလှယျတဲ့အကငျြ့ကို အခွားသူတှမေမွငျနိုငျအောငျ ဖုံးကှယျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ တဈခြို့ကိစ်စတှကေို စိတျဆိုးစိတျတိုနပေမေယျ့ စိတျကိုလှတျပွီး ဒေါသကိုထိနျးထားတတျကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ မထိနျးသိမျးနိုငျတော့ဘူးဆိုရငျတော့ အခွားသူတှေ အလနျ့တကွားဖွဈအောငျ လုပျတတျပွီး လူတဈဦးတဈယောကျကိုပဲ ဒေါသမထှကျပဲ အနီးအနားမှာရှိတဲ့သူတှအေားလုံး မလုံမလဲဖွဈတဲ့အထိ စှပျစှဲပွောဆိုတတျတဲ့အကငျြ့ရှိပါတယျ။